Kyocera Fekitori | China Kyocera Vagadziri, Vatengesi
Kyocera brand grooving carbide inopinza GMM3020-MT PR930 ine yakakwira kucheka kumhanya
Zvakanakira Kyocera carbide yekuisa: Yemakwikwi Mutengo Wakanaka Kugadzirwa Pfupi Dhirivhari Nguva Yemhando yakavimbiswa Madiki Madhiraini Anogamuchirwa ehupfumi uye ane zvibereko muwedzero sarudzo zvinoenderana nemamiriro emumwe munhu ekucheka (kuomesa, semi-kupedzisa uye kupedzisa). Tsanangudzo: 1.Brand: Kyocera 2.Feature: Kwakanyanya kupfeka kuramba giredhi uye inokodzera kumhanya kwakanyanya kuenderera kucheka 3.Package: Yekutanga epurasitiki bhokisi. 4. Mhando dzakasiyana uye mamakisi esarudzo. 5. MOQ: zvidimbu gumi (1 bhokisi) Zvimwe ...
Kyocera TNGG160404 Indexable Carbide Inoisa TNGG160404R-S PR930
Zvimiro zveKyocera Indexable Carbide Inoisa: 1.Original Kyocera brand kubva kuJapan. 2. Kyocera Indexable Carbide Inoisa inokodzera machining simbi 3. Kyocera Indexable Carbide Inoisa ine akasiyana zvigadzirwa zvekucheka, kugaya uye tambo. Kugadzikana uye kuchengetedzeka kweKyocera Inotaridzika Carbide Inoisa iri mukutendeuka kunobatsira 5.ISO & ANSI nzvimbo yekushandisa. 6.Tine hombe hombe yeKyocera Indexable Carbide Inoisa mudura redu uye tinogamuchira odha yako. Kunyatso ...
Kyocera TPGH ceramic lathe matipi TPGH110304L TN60
Zvimiro zveKyocera ceramic lathe matipi: 1.Original Kyocera brand kubva kuJapan. 2. Kyocera ceramic lathe matipi akakodzera machining simbi 3. Kyocera ceramic lathe matipi ane akasiyana zvigadzirwa zvekucheka, kugaya uye tambo. Kugadzikana uye chengetedzo yeKyocera ceramic lathe matipi ari mukubudirira kutendeuka. 5.ISO & ANSI nzvimbo yekushandisa. 6.Tine hombe hombe yeKyocera ceramic lathe matipi mudura redu uye tinogamuchira odha yako. Magadzirirwo eKyocera ceramic lathe ti ...
Mutengesi akanyanya Kyocera carbide cutter inoisa VNGA160404S01525 A66N
Zvimiro zveKyocera carbide cutter inoisa: 1.Original Kyocera brand kubva kuJapan. 2.Kyocera carbide cutter inoisa yakakodzera machining simbi, simbi isina simbi, simbi yakakandwa. 3.Kyocera carbide cutter inoisa ine akasiyana zvigadzirwa zvekucheka, kugaya uye threading. Kugadzikana uye chengetedzo yeKyocera carbide cutter inoisa iri mukutenderera kune zvibereko. 5.ISO & ANSI nzvimbo yekushandisa. 6.We tine hombe stock yeKyocera carbide cutter inoisa mudura redu uye tinogamuchira odha yako ...
Yekutanga Kyocera japan WNMG inochinja blade WNMG080408HQ CA5525
Zvimiro zveKyocera inoshandura blade: 1.Original Kyocera brand kubva kuJapan. 2.Kyocera yekushandura chipande yakakodzera machining simbi 3.Kyocera yekucheka blade ine huwandu hwakasiyana hwezvigadzirwa zvekucheka, kugaya uye kuruka. Kugadzikana uye chengetedzo yeKyocera inoshanduka blade iri mukubudirira kutendeuka. 5.KYOCERA inzvimbo yeOO O & ANSI yekushandisa. 6.Tine hombe hombe yeKyocera inoshandura reza mudura redu uye tinogamuchira odha yako. Rondedzero yeKyocera inoshandura blade: Zita reBrand: Ky ...